Izitshalo ezi-5 zasekwindla zangaphakathi | Bezzia
Izitshalo ezi-5 eziwela endlini
Ukuba nezitshalo ekhaya kuyindlela yokuletha imvelo ekhaya, ukuphila okugcwele izinzuzo zempilo yengqondo. Kepha kubaluleke kakhulu ukukhetha kahle ukuthi hlobo luni lwezitshalo ngokuya ngamazinga okushisa ezemvelo, izidingo zezinhlobo noma ikhono lakho lokuzinakekela. Ngoba izitshalo zidinga ukunakekelwa okuningi, ezinye ngaphezulu noma ezinye ngaphansi, kepha zonke zidinga ukuzinikezela ukuze zikhule futhi zihlale zilungele isikhathi eside.
Ukuwa yisikhathi sokugcwalisa ikhaya ngezinhlobo zezitshalo ezinamaqabunga amakhulu, aluhlaza njenge-potus. Yize kuyisikhathi sokuwa kweqabunga, ekwindla izimbali ezinjenge rose of pitiminí nazo ziyaqhakaza. Futhi njengoba, sekuyisikhathi sokulungisa i-poinsettia noma i-poinsettia, ukuze ifike namaqabunga ayo abomvu futhi ayigugu ukuhlobisa itafula ngoKhisimusi.
1 Yiziphi izitshalo zasekwindla ezifanele ingaphakathi
1.1 I-dwarf rose noma i-pitimini
1.5 Phakathi kwezitshalo zasekwindla, i-poinsettia
Yiziphi izitshalo zasekwindla ezifanele ingaphakathi
Kunezinhlobo ezingenakubalwa zezitshalo ongaba nazo ekhaya unyaka wonke futhi ezizomelana ngokuphelele nezinguquko zonyaka zokushisa. Emabhaloni nasezintabeni, izitshalo ezinhle kakhulu ongakhetha kuzo ukuwa yi-calendula, i-wallflower, ama-daisy noma i-pansies. Ngaphezu kwezitshalo eziluhlaza ezinamaqabunga eziqinile kakhulu.
Kepha ngaphakathi kunezimo ezahlukahlukene, njengomswakama noma ukungabi bikho kwawo, ukushisa, ukufudumeza nezimpawu ezihlukile zendlu ngayinye. Zonke kufanele zinakwe ngaphambi kokukhetha izitshalo ongahlobisa ngayo ingaphakathi lendlu. Okulandelayo siyakutshela yiziphi izitshalo ezingcono kakhulu zokuwa okufanele ube nazo ekhaya kanye namathiphu wokuzinakekela kahle.
I-dwarf rose noma i-pitimini
Luhlobo lwerosesi olukhula ebhodweni, nezimbali ezincane ezigcwele umbala nephunga ongathola ngalo isikhala esigcwele impilo ngaphakathi endlini. Ukuphela kwento okufanele uyikhumbule ukuthi kunjalo isitshalo esidinga ukunakekelwa okuningi, ukuchelela kanye nokusika izihlahla njalo ukugcina isimo sesitshalo. Yibeke endaweni ekhanya kakhulu kodwa lapho ingatholi khona ilanga eliqondile.
Isitshalo esinamaqabunga amakhulu, okulula ukusinakekela futhi siphelele ukuba nakho kokubili ngaphakathi nangaphandle. Kunezinhlobonhlobo eziningi ze-monstera futhi zonke zinikeza amaqabunga amahle azokuvumela ukuthi ugcwalise ikhaya lakho ngempilo ngokunakekelwa okuncane kakhulu. Isici esiteleka kakhulu se-monstera ukuthi endlini ayihlumi izimbali, kodwa ngaphandle iyakhula.
Lesi sitshalo siqhakaza ngokufika kwekwindla, simelana kakhulu futhi asidingi ukunakekelwa okuyisisekelo ukuze sihlale siphelele iminyaka eminingi. Beka isitshalo endaweni ekhanyayo, lapho ingathola umoya omncane kepha ngaphandle kokuyifinyelela ngqo. Futha izimbali ze-chrysanthemum futhi zizogcina zilungele izinyanga ezimbili.
I-ficus ingesinye sezitshalo ezibonga kakhulu, ngoba ngokunakekelwa okuncane kakhulu ihlala iphelele iminyaka eminingi. I-ficus idinga ukukhanya okuningi, ngisho, ngiyabonga imisebe yelanga ngqo. Esikhundleni salokho, Izinguquko ezingazelelwe ekushiseni azizwa zizinhle nakancane, ngakho-ke kufanele uzame ukugcina ukushisa kwamakamelo okuzinzile.
Phakathi kwezitshalo zasekwindla, i-poinsettia
I-poinsettia noma i-poinsettia yimbali kaKhisimusi engapheli. Ngamaqabunga ayo amakhulu abomvu kulungile ukuhlobisa noma yiliphi itafula ngamaholide kaKhisimusi. Lesi sitshalo siqhakaza ikakhulukazi lapho kufika ubusika, kepha uma ufuna ukuyigcina unyaka wonke, ekuqaleni kwekwindla kufanele wenze izihlahla zokugcina. Lokhu kubalulekile ngoba uma kungenjalo isitshalo sikhula ngamagatsha ahlakazekile futhi silahlekelwe ukwakheka kwaso.
Ukuphela kukaSepthemba noma ekuqaleni kuka-Okthoba kulapho kufanele kuthenwe okokugcina. Ngakho-ke silungisa lesi sitshalo ukuze ngokwemvelo sithole imibala yaso nokuqhakaza kwaso. Ngokunakekelwa okuhle, izitshalo zakho zasekwindla zizokukhapha unyaka wonke. Ukuletha ukuthinta kwempilo okuzokusiza ukuthi ujabule ekhaya lakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Izitshalo ezi-5 eziwela endlini
Umshuwalense Wezilwane Ezifuywayo: Usebenza Kanjani?
Ukuqiniseka kuvumela injabulo kwabashadile